(XOG) RW Khayre & MW Farmaajo oo kadhaxeeyo khilaaf aad u adag - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (XOG) RW Khayre & MW Farmaajo oo kadhaxeeyo khilaaf aad u adag
Waxaa maalmihii u danbeeyay Kooxda ololaha Madaxweyne Farmaajo usheegayeen siyaasiinta mucaaradka & Xildhibaanada JFS in ay ceeri doonan RW Hassan Ali Kaire maadama Madaxweyne farmaajo uu rabo inuu helo mudo kordhin labo sano ah.
Sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay Muqdisho Online u sheegen in R/W Kaire dhowr jeer oo hore looso jeediyay inuu danta qaranka owgeed & mida Xisbiga Nabad & Nolol darteed uu isku casilo sida loo dhiso dowlad midnimo qaran balse uu diiday in ka dago xilka .
RW Khayre ayaa si cad ugu sheegay fahad yaasiin & Madaxweyne Farmaajo in Xisbiga Nabad & Nolol ay burburi doonto hadii la isku dayo in moshin ka dhan ah lahorgeeyo baarlamaanka , asagoo ugu baaqay saaxiibadiisa in ay tixgaliyaan garabna ku siiyan inuu ku guuleesto Kursiga Madaxweynenimo Maadama Madaxweyne Farmaajo uu ku fashilmay Siyaasada Soomaaliya fursadna u laheen.
Fahad Yaasiin oo isku dayo faro badan sameeyay siduu u qanciyo R/W Kaire ayaa ku guuldareestay .
Dowlada Qatar oo so faragalisay Dooda u dhaxeeyso Xisbiga Nabad & Nolol ayaa casuumad uso dirtay R/W Hassan Ali Kaire si ay ugu qanciso inuu is casilo arrintaas oo iyana cuslaatay.
R/W Khayre ayaa aamisan inuu fursad siyaasadeed leeyahay suurta gal tahay inuu ku guuleesto tartanka doorashada 2021.
Lama ogo halka uu ku danbeeynayo xiisada siyaasadeed ee u dhaxeeyso Madaxweyne Farmaajo & R/W Hassan Ali Kaire.
Previous articleDhagaysiga Dacwada rag loo haysto dilkii weriye Khashoqji oo Turkiga ka bilaabatay
Next articleDFS oo adeegsaneyso Siyaasiin & Dhaqanka Mudulood ayaa wax kabadal ku sameeysay Ajandaha Shirka 13 July